Ac Milan oo sare u qaaday dalabkii ay ku dooneysay xiddiga bilooyinka ku sugan Arsenal ee Lucas Torreira – Halkey wax marayaan? – Gool FM
Ac Milan oo sare u qaaday dalabkii ay ku dooneysay xiddiga bilooyinka ku sugan Arsenal ee Lucas Torreira – Halkey wax marayaan?
(Milan) 22 June 2019. Waxaa lagu soo warramayaa in kooxda Ac Milan ay sare u qaaday dalabka ay ku dooneyso xiddiga bilooyinka kaliya ku sugan Arsenal ee Lucas Torreira, kooxda reer talyaani waxey diyaar la tahay qiimo u dhaxeeya 30 ilaa 40 Malyan oo Yuuro, halka Gunners ay dooneyso in la siiyo 50 Malyan oo Yuuro.
Sida lagu qoray wargeyska Tuttosport, maamulka kooxda Ac Milan ayaa doonaya iney xiddigaan heerka caalami ee reer Uruguay dib ugu soo celiyaan horyaalka talyaaniga isla markaana la mideeyaan macalinkiisii hore Marco Giampaolo kaas oo shaqada tababaranimo ee Milan ka badalay Gennaro Gattuso .
La Gazzetta dello Sport waxey baahisay in kooxda waqooyiga London ka dhisan ay dooneyso in looga iibsado xiddiga joogga gaaban 50 Malyan oo Yuuro, waxaana la xasuustaa iney 30 Malyan oo Yuuro fasalkii hore kula soo saxiixdeen.
23-jirkaan ayaa kasoo muuqday kooxda Gunners 50 kulan dhamaan tartamada oo dhan, laba gool ayuu dhaliyay halka uu caawiyay laba kale, si kastaba xiddigaan uma muuqdo mid kusoo baxaya Gunners.
Dhanka kale Tuttosport ayaa fahansan in Milan ay qiimahaan oo kale ka gudbisay xiddiga Real Madrid Dani Ceballos kaas oo ku maqan waajibaadka qaranka, tartanka qaramada yurub ee 21-jirada ayuu ka qeyb galayaa.
Maadaama ay labadaan ciyaartoy wada doonayaan, tababaraha cusub ee kooxda Milan (Giampaolo) wuxuu aad u doorbidayaa in loo keeno Lucas Torreira.
Waa maxay sababta uu Mats Hummels isaga diiday ku biiritaanka Man United ka hor dib ugu laabashadiisa Borrusia Dortmund?
Goolhaye David Ospina oo sabab la sharraxay kaga baxay xerada tababarka xulka Colombia - Miyuu soo laaban doonaa?